5 ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ရထားအားဖြင့်ဥရောပ Explore ရန်အကြောင်းပြချက်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ရထားအားဖြင့်ဥရောပ Explore ရန်အကြောင်းပြချက်များ
တစ်ခုခုမယုံနိုင်လောက်အောင်တိတ်တဆိတ်တစ်ဦး၏ထွက်ငေးရှိပါတယ်အကြောင်းကိုကျေပွန်ရဲ့ ရထားပြတင်းပေါက်, သငျသညျမထငျမ? ဒါကြောင့်, ရငျးနှီးလုံခြုံရေး frisks အကြောင်းကိုမေ့လျော့, အရည်အဘို့ရှင်းလင်းစွာ Ziplock အိတ်, သုညရဲ့ privacy နဲ့အိမ်သာ-လျော့နည်း busses. ဒီဇင်ဘာလ၌ရထားထက်ဥရောပစူးစမ်းရန်မပိုကောင်းလမ်းရှိပါတယ်. ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း!
1. ဒီဇင်ဘာလ၌ရထားဥရောပ Explore နှင့်သင်မြင်ရပါလိမ့်မည် – နည်းပါးလာခရီးသွားဧည့်
သူတို့ဥရောပစူးစမ်းချင်သည့်အခါလူအတော်များများနွေရာသီကာလအတွင်းရေပန်းစားနေရာများမှစုပြုံ. သို့သျောလညျး, အဆိုပါနေသာရာသီဥတုကကဆောင်ကြဉ်းပါဘူး, လူထု. ကလူအများကြီးနဲ့စာရေး! ရိုးရှင်းစွာနည်းပါးလာခရီးသွားဧည့်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ဒီဇင်ဘာလ၌ရထားဥရောပစူးစမ်းဖို့ကိုချစ်. ပိုများသောရှုခင်း, ပဿဒ္ဓိ, နှင့်သင်တို့အဘို့အာကာသ!
2. ဆောင်းတွင်းနည်းလမ်းများအတွက်ရထားဥရောပ Explore – စျေးသက်သက်သာသာနှုန်းထား
ကျွန်တော်စျေးသက်သက်သာသာနှုန်းထားများအဘယ်ကြောင့်ယင်းအကြောင်းပြချက်ရိုးရှင်းစွာစဉ်းစားဆင်ခြင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ 1! နည်းပါးလာလူတွေကစျေးသက်သာအရာအားလုံးညီမျှ! ကျနော်တို့စျေးသက်သက်သာသာပြောနေတာဖွင့် ဟိုတယ်များ နှင့် ရထားလမ်းလက်မှတ်တွေ မြေပြင်ပေါ်တွင် (ဖြစ်ကောင်းမဟုတ်ခရစ္စမတ်န်းကျင်သော်လည်း /နှစ်သစ်).
တစ်ဦးကအစွန်အဖျား: လျှော့စျေးခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ်အလွန်မှီခိုသေးငယ်မြို့များတွင်ပိုမိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်. ဒါပေါ့, ပိုကြီးမြို့ကြီးများဖောက်သည်ရရန်ခဲယဉ်းအဖြစ်ကြိုးစားရန်မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါကြောင့် အမြော်အမြင်ရှိရှိအစီအစဉ် သင်တစ်ဦးဘတ်ဂျက်ပေါ်မှာဆိုရင်လျှင်!
ပေါ်မှာငါတို့ကြောက်မက်ဘွယ် post ကိုထုတ်စစ်ဆေး ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးဆောင်းရာသီပွဲတော်များ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထိပ်တန်းကရွေးခြယ်အပေါ်ပိုပြီးအချက်အလက်ချို့တဲ့နေလျှင်. လမ်းစျေးကွက်များ, အထူးသဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာလုံးဝနေရာတိုင်းများမှာ. တကယ်တော့, က 1400 ရဲ့ကတည်းကဒီဇင်ဘာလအစဉ်အလာခဲ့ပြီ! တစ်ဦးအပေါ်ဖြစ်ခြင်း ရထားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆိုလိုတယ်, ဒါကြောင့်သင်ရိုးရှင်းစွာသင်တကယ်ချစ်ကြရှာတွေ့တဦးတည်းမှာကြာကြာနေဖို့ရမည်ဟုဆုံးဖြတ်သင့်တယ်, ထို့နောက်သင်လုပ်နိုင်သည်! အဲဒီရထားခရီးသွား၏ဂုဏ်အသရေရဲ့. အဲဒီရထားထက်ဥရောပစူးစမ်းရန်မပိုကောင်းလမ်းဒီဇင်ဘာလတွင်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့င်.
သင်တစ်ဦးခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်အစဉ်အဆက်စောင့်ကြည့်ပါတယ်ပါလျှင်, အဲဒီမှာလေထု၏ခြယ်သနေတဲ့မှော်ရုပ်ပုံဖြစ်ခညျြနှောငျရဲ့. ရုပ်ပုံပေါ့ပေါ့ကျသွားမိုးစ, snowballs ပစ်ကလေးတွေ, တံစကျမွိတျရခေဲခြောငျး, ထူသောဆီးနှင်းမှတဆင့်လမ်းလျှောက်၏ muffled အကြပ်အတည်း. နှင့်သင်တန်း, မီးများနှင့်အလှဆင်! ရှိပါတယ် အခြားနေရာများ သင်တို့ကိုဥရောပနိုင်ငံအများစုအစိတ်အပိုင်းများထဲတွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် display ကိုအပြိုင်.
5. ဒီဇင်ဘာလတွင်ဥရောပကိုရထားဖြင့်လေ့လာပါ။ ဆောင်းရာသီအစားအစာ
ကွဲပြားခြားနားသောအစားအစာနိုင်ငံများတွင်လေ့လာစူးစမ်းဖို့ဘာပိုကောင်းလမ်းကမ်းလှမ်းမှုကိုရန်ရှိသည်? ဒီဇင်ဘာလ၌ရထားဥရောပ Explore, တနေ့ခြင်းတွင်အများအပြားမြို့ကြီးများသို့သွားရောက်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်. ထွက်ခွာသည် ဒေသခံတစ်ဦး အချို့သောစျေးကွက်နဲ့ဆောင်ကြဉ်း ရထားပေါ်တွင်မုန်ပြန်! သငျသညျရှိနိုင်တယ်လို့ နံနက်စာ, နေ့လယ်စာ, နှင့်ညစာစားပွဲ တွင်3ကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများ!
အဖျား: တွင် ဆွစ်ဇာလန် နှင့်ပြင်သစ်၏အစိတ်အပိုင်းများ, ကြိုးစား raclette နှင့်ဖွန်ဒူး, ပတ်ပတ်လည်အခြေပြုနေကြသည်နှစ်ဦးစလုံး၏ ဒိန်ခဲနွေး. ဂျာမန်အေးရရှိသွားတဲ့အခါအမဲသားထုတ်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ကြိုက်တယ်, နှင့်လှော်သစ်အယ်သီးမှာရောင်းချသူအဓိကဖြစ်ကြောင်း ခရစ္စမတ်စျေးကွက်. တွေးတောဆင်ခွင်တာတွေတစ်ဘက်အမိန့်ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့် ဝိုင်!
တစ်သက်တာ၏ရထားခရီးစဉ်ကိုဘွတ်ကင်ဖို့အဆင်သင့်? ကြီးမားသော! ပေါ်ဦးခေါင်းကို SaveATrain နှင့်လုပ်ရတဲ့နှင့်ဘွတ်ကင် - အခကြေးငွေအခမဲ့ခံစားပါ မီးရထားခရီးသွားလာ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/explore-europe-train-december/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#.ရာဝတီ ခရစ္စမတ် ခရစ္စမတ် europetravel အစာ မင်္ဂလာပါ longtrainjourneys ရထားခရီးသွား traveltips